March | 2014 | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
ဟော့ကင်း၏အယူအဆများ ဟော့ကင်းနာမည်ကြီးလာပုံ ဟော့ကင်းသည် (A Brief History of Time) စာအုပ်ကို ရေးသားပြီးနောက် နာမည်ကြီးလာသည်။ ဟော့ကင်းနာမည်ကြီးလာရသော အချက်အလက်များတွင် သူသည် သိပ္ပံပညာတို့၏ အခြေခံ အကျဆုံးသော ဘာသာရပ်ကို လေ့လာလိုသည်ဟု ကြွေးကြော်ခဲ့သည်။ ယင်းကိုသူက ရူပဗေဒ ပညာရပ်ဟု သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဤကားသူ့သဘောထားနှင့် သူ့အဆုံးအဖြတ်ပင်ဖြစ်သည်။ (– I wanted to do research in physics because it was the most … Continue reading →
Posted in Articles	| Tagged Black Holes, Myanmar Posts, ဟော့ကင်း	| Leaveacomment
ဟော့ကင်း၏အယူအဆများ နှစ်ခြိုက်ဖွယ်ကောင်းသောသိပ္ပံပညာရှင်များ၏သဘောထားများ နယူတန်သည် အောက်ပါစကားကို ပြောခဲ့သည် – (.. .. I do not know how I may appear to the world, but to myself I seem to have been only likeaboy, playing on the sea shore, and diverting myself, … Continue reading →
Posted in Articles	| Tagged Myanmar Posts, သိပ္ပံ	| Leaveacomment
နိဗ္ဗာန်ကိုစိတ်ဝင်စားတာသာဓုခေါ်ပါတယ် — နိဗ္ဗာန်ကို စိတ်ဝင်စားတာ ကောင်းသော စိတ်ဝင်စားခြင်းပါပဲ၊ သာဓုခေါ်အပ်ပါတယ်၊ ခေါ်လည်း ခေါ်ဆိုပါတယ်။ နိဗ္ဗာန်က အသင်္ခတဓာတ်ကိုး — ဒီတော့ ရုပ်နာမ်တွေက သင်္ခတဓာတ်ဆိုတော့ ရုပ်နာမ်တွေက နိဗ္ဗာန်ထဲ ဝင်လို့မရဘူး။ ဒီတော့ နိဗ္ဗာန်အကြောင်း သိချင်ရင် ဘယ်လို လုပ်ရမှာလည်းဆိုတော့ – ဒီရုပ်နာမ်ကို အပျက်ရှုတဲ့ မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ် တည်ဆောက်ရမှာ။ မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ် ရပြီဆိုရင်တော့ (မဂ္ဂဖလာန မာရမ္မဏဘူတော၊ အသင်္ခတ ဓမ္မော) ဆိုတာ ရှိတယ်လေ။ မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်ရရင် … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, ဗုဒ္ဓဘာသာ, မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်	| Comments Off on နိဗ္ဗာန်ကိုစိတ်ဝင်စားတာသာဓုခေါ်ပါတယ် —
နိဗ္ဗာန်ဟူသည် — နိဗ္ဗာန်ဟူသည် အံ့သြဖွယ်ရာကောင်းသော ဓာတ်အမျိုးအစား ဖြစ်သည်။ အသင်္ခတဓာတ်၊ အနုတ္တရဓာတ်ဟုလည်း ခေါ်ဆိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ပြုပြင်ခြင်းငှာ မအပ်သော ဓာတ်ဖြစ်သည်။ အမြတ်တကာ့ အမြတ်ဆုံးဓာတ်ဖြစ်သည်။ ပရမတ္ထတရား လေးပါးတို့တွင် အမြတ်ဆုံးသော ဓာတ်ဟူ၍ သတ်မှတ်ခံရသည်။ နိဗ္ဗာန်သည် လွန်စွာသိမ်မွေ့နူးညံ့သည်။ (၃၁) ဘုံသည် လွန်စွာကြမ်းတမ်းသည်၊ ရုပ်ကမ္ဘာသည် လွန်စွာကြမ်းတမ်းသည်။ နိဗ္ဗာန်သည် လွန်စွာသိမ်မွေ့နူးညံ့၊ အသိခက် နက်ရှိုင်း လှလေသည်။ သာမာန်ပုထုဇဉ်များ မသိနိုင်ချေ။ မျက်မှန်းဆ၍သာ ပူဇော်ကြည်ညိုနိုင်သည်။ အရိယာ သူတော်စင်ကြီးများမှ မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်ဖြင့် မျက်မှောက်ပြု … Continue reading →
ဟော့ကင်း၏အယူအဆများ သိပ္ပံပညာရှင် ဟော့ကင်းသည် ဟိုက်ဇင်ဘတ်၏ မသေချာခြင်း နိယာမကို အသေးစိတ် ဖော်ပြရာ၌ အိုင်းစတိုင်း၏ အထွေထွေနှိုင်းရ သီအိုရီနှင့် ကွာဟနေကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ (This uncertainty principle of Heisenberg showed that one could not measure the state ofasystem exactly, so one could not predict the probabilities of different outcomes.) … Continue reading →
Posted in Articles	| Tagged Black Holes, ဟော့ကင်း	| Comments Off on ဟော့ကင်း၏အယူအဆများ
မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ကွန်မြူနစ် လားလားမှမဖြစ်ပါ —
Posted on March 11, 2014 by chitnge
မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ကွန်မြူနစ် လားလားမှမဖြစ်ပါ — မြန်မာနိုင်ငံ၌ ကွန်မြူနစ် အသံပလံများ အနည်းငယ် ကြားရသည်။ ဤကိစ္စကို ပြည်သူလူထုများ သတိထားရမည်။ မြန်မာနိင်ငံနှင့် ကွန်မြူနစ်သည် လုံးဝမအပ်စပ်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ အဓိက ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို တိုက်ဖျက်လိုသော ကွန်မြူနစ်များအား အခွင့်အရေးပေး၍ မရပါ။ ဤကိစ္စကို တိုင်းသူပြည်သားများ ကြိုတင်ဆင်ခြင် စဉ်းစားသင့်လေသည်။ ကိုယ့်ရှိတဲ့ ပိုက်ဆံကို ဝေမည် မအောင်းမေ့ဘဲ ဘုရားကရွှေတွေကို ခွာပြီးတော့ ဝေမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးမျိုးဟာ ဦးနှောက်ပျက်တဲ့ စိတ်ကူးမျိုပဲ ဖြစ်တယ်။ ဒီလို … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged ကွန်မြူနစ်, ဗုဒ္ဓဘာသာ	| Comments Off on မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ကွန်မြူနစ် လားလားမှမဖြစ်ပါ —
Posted on March 7, 2014 by chitnge
ဟော့ကင်း၏အယူအဆများ ဟော့ကင်းသည် Black Holes ထဲ၌ ဘာများရှိသည်ဆိုသည်ကို စိတ်ဝင်စားခဲ့ဖူးသည်။ Black Holes က တစ်စုံတစ်ရာကို ဝါးမြိုလျှင် ဝါးမြိုခံရသော အရာရာတို့သည် မည်သို့ဖြစ်သွားသနည်း ?? သူတို့သည် ပျက်စီးသွားကြပြီလား ?? (သို့မဟုတ်) အခြားသော စကြဝဠာသို့ ရောက်သွားပြီလား ?? ထိုအကြောင်းအရာများအား ဟော့ကင်းသည် လွန်စွာ စိတ်ဝင်စားခဲ့ဖူးသည်။ သို့သော် သူရယ်စရာ ပြောပြသည်မှာ သူသည် Black Holes ထဲ၌ ဘာများဖြစ်နေသည်ကို သိလိုသော်လည်း သူသည် … Continue reading →
Posted in Articles	| Tagged Black Holes, ဟော့ကင်း	| Leaveacomment
Posted on March 5, 2014 by chitnge
ဟော့ကင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဟော့ကင်းသည် တချိန်က Black Holes ထဲ၌ သိပ္ပံပညာရှင်များ လေ့လာ၍ မရနိုင်သော အရာများ ရှိသည်ဟု တင်စား၍ ဖော်ပြခဲ့ဖူးသည်။ တင်စားချက်မှာ အိုင်းစတိုင်းကိုပင် မှားကြောင်း ထောက်ပြသကဲ့သို့ ရှိခဲ့သည်။ အိုင်းစတိုင်းသည် တစ်ချိန်က (God does not play dice.) God သည် ကြွေအံမကစားပါ ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ရည်ညွှန်းချက်မှာ ဤစကြဝဝဠာကြီး၌ ဖြစ်ရပ်ဖြစ်စဉ်တို့သည် ကြွေအံကစားသကဲ့သို့ ပရမ်းပတာ မဖြစ်နိုင်ပါဟု အိုင်းစတိုင်းသည် ဖော်ပြခဲ့ဘူးသည်။ ယင်း (God … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged သိပ္ပံ, ဟော့ကင်း	| Leaveacomment